HomeSuuqa kala iibsigaWararka Xanta Suuqa Kala iibsiga ee Maanta, Khedira, Donnarumma, Schuurs, Puig, Thauvin
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Jarmalka Sami Khedira, oo 33 jir ah, ayaa sheegay in u dhaqaaqista Premier League ay noqon laheyd ikhtiyaar marka qandaraaskiisa Juventus uu dhaco xagaaga soo socda – waxaana uu sheegay inuu xiriir la sameynayo tababaraha Everton Carlo Ancelotti iyo tababaraha Tottenham Jose Mourinho.
Goolhayaha AC Milan Gianluigi Donnarumma qandaraaska uu kula joogo kooxda ka dhisan Serie A wuxuu dhacayaa 2021 laakiin 21 jirkaan reer Italy ayaa sheegay in wakiilkiisa uu la hadli doono kooxda isla markaana uu doonayo inuu iyaga la sii joogo “waqti dheer.
Liverpool ayaa lala xiriirinayay daafaca Ajax Perr Schuurs, oo 21 jir ah, laakiin Reds ayaan wax dalab ah ka gudbin ciyaaryahanka reer Holland. (Voetbal Primeur – af Dutch)
West Ham iyo Chelsea ayaa isha ku haya horumarka 18 jirka daafaca bidix ee reer England Matthew Bondswell, kaasoo amaah kula jooga FC Dordrecht oo ka socda RB Leipzig. (Telegraph)
Ciyaartii Newcastle ay la ciyaartay Aston Villa jimcihii ayaa shaki la galin karaa ka dib markii cudurka loo yaqaan ‘coronavirus’ uu ku qasbay afar ciyaaryahan iyo hal xubin oo ka tirsan shaqaalaha inay go’doomiyaan.
Tababarihii hore Gus Poyet ayaa qarka u saaran inuu si layaableh dib ugu soo laabto Sunderland ka dib markii la ceyriyay Phil Parkinson Axadii.
Arsenal ayaa dib u soo cusbooneysiisay xiisihii ay u qabtay daafaca RB Leipzig Ibrahima Konate waxayna rajeyneysaa inay dhameystirto heshiiska 21 jirka daafaca dhexe uga ciyaara xulka France U21 bisha Janaayo.
Newcastle ayaa ka fiirsaneysa heshiis ay dib ugula soo saxiixato daafaca Eintracht Frankfurt Jetro Willems. 26 jirkaan daafaca bidix ee reer Netherlands ayaa 20 kulan oo amaah ah ugu ciyaaray St James ‘Park xilli ciyaareedkii hore ka hor inta uusan dhaawac jilibka ah soo gaarin xilli ciyaareedkii hore bishii Janaayo. (Gazzet)
Celtic ayaa xiiseyneysa saxiixa Crystal Palace iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Republic of Ireland James McCarthy, laakiin Aston Villa iyo Burnley ayaa sidoo kale xiiseynaya 30 jirkaan. (Teamtalk)
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa sheegay inuusan “saadaalinaynin wax badan oo soo galaya iyo wax ka baxsan” inta lagu jiro bishaan Janaayo.
Xiddigaha khadka dhexe ee reer Spain Riqui Puig oo 21 jir ah iyo Carles Alena oo 22 jir ah ayaa u dagaalamaya mustaqbalkooda Barcelona iyaga oo ay weheliyaan weeraryahanka reer Denmark Martin Braithwaite oo 29 jir ah iyo daafaca bidix ee reer Spain Junior Firpo oo 24 jir ah (Marca)
Ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee reer France Florian Thauvin ayaa sheegay inuu “aad u dhaqaajiyay” agaasimaha farsamada AC Milan Paolo Maldini isagoo qirtay in kooxda ka dhisan Serie A ay xiiseyneysay saxiixiisa. Qandaraaska 27 jirkaan ee kooxda Marseille ayaa dhacaya xagaaga 2021. (Football Italia)
Juventus ayaa laga yaabaa inay bartilmaameedsato Atletico Madrid iyo daafaca dambeedka dhexe ee Montenegro Stefan Savic, 29, si ay u xoojiso daafaceeda. (Calciomercato)
Daafacii hore ee bidix ee reer Brazil Roberto Carlos ayaa sheegay in heshiiskii uu ugu dhaqaaqi lahaa Chelsea uu ahaa mid “la isku raacay” in 2007 kaliya uu dhaco waqtiyadii ugu dambeeyay. (Goal)
Barnsley ayaa isha ku haya inay kordhiyaan amaahda ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Leicester City Matty James ee kooxda, iyadoo 29 jirkaan reer England uu haatan ku egyahay bisha Janaayo. (Leicestershire Live)